Taariikhda Dhaqaalaha ee Dhaqaalaha | FXCC
Home / Waxbarashada & Cilmi-baarista / Research / Calendar dhaqaalaha
Taariikhda Dhaqaalaha ee Dhaqaalaha
Taariikhda dhaqaale waa qalab ganacsi oo qiimo leh oo badanaa la iska indha-tiraa oo qiimeeya ganacsatada. Ka hor intaan la wareegin; iyada oo la ogaanayo jadwalka dhaqaale ee loo marayo habka jadwalka, waa arrin muhiim ah oo lagu taageerayo waxqabadka ganacsiga. Helitaanka jadwal taariikheed oo dhamaystiran oo dhamaystiran, waa mid aad u muhiim ah ganacsatada FX qiimahaasi waxay qaadataa xoogga la saaro.
Sida loo ka faa'iideysta Taariikhdaada
Tijaabi taariikhda taariikhda ee jadwalka
Xulo qaarada ay xogtu la xiriirto
Xulo dalka aad xogta la xiriirto
Xakamee kalendarkaaga si aad u muujiso daabacaadyada iyo sii deynta
Xulo heerka saameynta; sare, dhexdhexaad ama hooseeya
Dhacdooyinka dhaqaalaha, warbixinada iyo sii deynta xogta, waxaa daabacay: Dawladaha, waaxyada dawladda iyo ururo gaar ah; sida Markit la socota PMI la ixtiraamo oo la filan karo, waxay si wayn u saameyn kartaa qiimaha lacageed, gaar ahaan haddii la miisaamayo ladagaalam kale oo lacag ah.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo FXCC waxay ku darsatay kalandarka dhaqaalaha ee macaamiisha iyo macaamiisha qiimaha leh. Sida kalandarka dhaqaale badan waxay leedahay dhamaan sifooyinka fudud iyo faa'iidooyinka aan ka fileyno jadwalka asaasiga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku darnay waxyaabo dheeraad ah oo dheeraad ah iyo macnaha si loo hubiyo in jadwalkeenu uu kordhiyay ku-tiirsanaanta macaamiisheenna. Jadwalku wuxuu sidoo kale leeyahay muuqaal muujinaya heerarka saameynta suuqyada ah ee war baahinta la helay.
Marka xulashada xuduudaha kala duwan ee hababka badhanka, macaamiisha FXCC waxay awood u yeelan doonaan inay dejiyaan doorashadooda.